के कारणले बढिरहेको छ सुनको मुल्य ? अझै कति पुग्ला ? – KhabarTime
नेपाली बजारमा सुनको मुल्य अहिलेसम्मकै नयाँ उचाईमा पुगेको छ। पछिल्लो कारोबारमा सुन प्रति तोला १ लाख ३ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। कोरोनाको कारण बन्द भएको कारोबार पुन: सुरु भएदेखिनै सुनको भाउ दिन प्रतिदिन उकालो चढिरहेको छ।
दिन दिनै नयाँ रेकर्ड राख्दै गएको सुनको मूल्य कहिलेसम्म यसरी बढिरहन्छ भन्ने चाँसो सबैमा देखिन्छ। त्यसमा पनि लगानी भन्दा पनि गरगहना र सजावटका लागि बढी प्रयोग हुने नेपाली बजारमा सुनको मुल्यप्रति सबैको चाँसो हुने गर्दछ।
किन बढ्दै छ मूल्य ?
नेपाल सुनचाँदी ब्यबसायी महासंघका उपाध्यक्ष दियस रत्न शाक्य कोरोनाको प्रभावको कारण मूल्य बढिरहेको बताउछन् । विश्वमा लकडाउन खुलेपनि पहिलाको जस्तै अन्य लगानीको वातावरण नभएको र सुनमा नै लगानी गर्नको लागि सुनको माग बढेकोले सुनको मूल्य निरन्तर बढीरहेको उनी बताउछन् ।
यसका साथै अमेरिकाले लकडाउन कै बीच १० ट्रिलियन डलर रकम छापेका कारणपनि सुनको भाउ बढेको शाक्यको भनाई छ। अमेरिकाले कोरोनाले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र उकास्न एकै पटक यतिधेरै रकम छापेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सुनको भाउमा परेको शाक्यको भनाई छ।
सुन चाँदीको भाउ यसरी लगातार बढीरहने क्रम अझै ६ महिनासम्म जारी रहन सक्ने शाक्य बताउँछन् । कोरोना महामारी रहेसम्म सुन चाँदीको भाउ बढी रहने उनको दाबी छ। शाक्य अझै छ महिनासम्म सुनको भाउ निरन्तर बढी रहने र नेपालमा सुनको मूल्य प्रति तोला एक लाख २० हजारसम्म पुग्ने दावी गर्छन।
के कुराले सुनको मुल्य बढिरहेको छ ?
यो मुख्य रुपमा कोरोनाको महामारीबाट उत्पन्न परिस्तिथिले नै सुनको मुल्यलाई नयाँ उचाईमा पुर्याएको विश्लेषकहरुको बुझाई छ। त्यसमा पनि सरकार र केन्द्रिक बैंकहरुको रणनीति बिशेषगरि अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले कोरोनाको कहरमा महसुस गरेको अन्यौलता र अस्पष्टताले सुनको मुल्यलाई नयाँ उचाईमा पुर्याएको जानकारहरुको भनाई छ।
अन्यौलतामा लगानीका अन्य क्षेत्रप्रति लगानीकर्ताको बिश्वास नहुनु र आफ्नो रफ्तार छाडेर सेयरबजार कुनै पनि बेला घट्न सक्ने बुझाई भएकाले धेरैले सुनमा नै लगानी गर्दा मुल्य आकाशिएको बुझाई छ। कोरोनाको अन्यौलता नै सुनको मुल्य बढ्नुको कारण हो भन्ने बुझाई छ।
कहिलेसम्म बढ्छ सुनको मुल्य ?
कोरोनाको विश्वब्यापी महामारीको यो बेला केहि पनि निश्चित छैन। त्यसमा पनि लगानी गर्ने बिषयमा। कोरोनाको अन्यौलता कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने बिषयले सुनको मुल्यलाई निर्देशित गर्ने भएकाले अबको केहि महिना सुन थप महँगो हुने गोल्डमेन स्याक्सको विश्लेषण छ।
नेपाली बजारमा सुनको मुल्यमा देखिएको बढोत्तरीलाई आधार मान्ने हो भने सुनको मुल्य एक पटक बढेपछि फेरी पुरानो मुल्यमा नै फर्किएको देखिदैन। निश्चित समयको कारोबारको मुल्यमा केहि उतारचढाव देखिएपनि सुनको मुल्य भने निरन्तर रुपमा बढेको नै देखिन्छ।
२०६३ सालको जनआन्दोलनको बेला प्रति तोला १९ हजार रहेको सुनको मुल्य त्यसयता निरन्तर बढिरहेको छ। गत बर्ष ८२ हजार प्रति तोला रहेको सुनको मुल्य यो बर्ष १ लाख ३ हजार पुगेको छ